Tenga Pyridoxal phosphate powder (54-47-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Pyridoxal phosphate
Rating: SKU: 54-47-7. Category: MaR & D Reagents
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhutano hwePyridoxal phosphate powder (54-47-7), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano hwehutano.
Pyridoxal phosphate powder, neimwe nzira inozivikanwa sePLP, pyridoxal-5'-phosphate kana P5P, ndiyo inoshanda kana coenzyme fomu revhitamini B-6. P5P ine matatu echisikigo emakemikari - pyridoxal, pyridoxamine uye pyridoxine. Muviri wako unoda P5P pamabasa akasiyana siyana kusanganisira kukura kwemhasuru uye kugadzirisa, neurotransmitter mabasa uye simba metabolism.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) vhidhiyo
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Basic Characters
Molecular Kurema: 247.14
Melt Point: 139 kusvika 142 ° C
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) kutenderera
Mazita echigadzirwa: Pyridoxal-phosphate
Zita reGeneric: PLP, pyridoxal-5'-phosphate kana P5P
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Kushandisa
Pyridoxal-5-Phosphate, kana P5P sezvinowanzozivikanwa, ndiyo inoshanda ye vitamini B6. Muzvokudya kana zvakawanda zvinowedzera, vitamini B6 inowanikwa mune imwe yemhando mitatu: pyridoxine hydrochloride, pyridoxal, kana pyridoxamine. Mukati memuviri, maitiro aya eB6 anofanirwa kushandurwa nechiropa kune chimiro chinoshanda muviri - P5P. Kuderera kwekutendeuka kubva kusina kushandiswa kusvika kuhutachiona hwema vitamini B6 zvakataurwa, kunyanya kune vanhu vane chirwere chekushaya simba, chirwere che celiac, vanhu vakuru, uye vana vane autism. Nokudya vitamini B6 muP5P inoshandiswa, kutendeuka hakuchina kukosha, uye zvizere zvakakwana zvinowanika pakarepo mushure mekudya.
Ndeipi muyero wePyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Zvinoenderana ne "Vitamin B6 Therapy: Anochinjika Musiki," P5P inogona kubatsira kubvisa zviratidzo zve seborrheic dermatitis, premenstrual syndrome, autism uye mamwe marudzi eanemia. Dozi yakakurudzirwa yeP5P inosiyana zvichienderana nekushomeka chaiko kana mamiriro ehutano aunoda kurapa kubva pa2.5 mg kusvika pa50 mg zuva nezuva. Iwe unofanirwa, zvakadaro, utaure nachiremba wezvechiremba usati watora chero hutano hwekuwedzera - kusanganisira P5P.
Iyo Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) inoshanda
Mumuviri wako, P5P inobatsira zvikuru mumamino acid metabolism, heme biosynthesis, neurotransmitter biosynthesis, collagen formation uye glucocorticoid action. Uyezve, P5P inobatsira kuenzanisa mararamiro ako e-sodium uye potasium kuburikidza nekugadzirisa kushanda kwemagetsi kwemitsipa yako, mwoyo uye musculoskeletal system. Iwe oga uye pamwe chete nemamwe enzymes, P5P inobatsira muviri wako kuvaka uye kuputsa amino acid uye kuchinja amino acids kubva kune imwe kuenda kune imwe. Uyezve, P5P inobatsira kusunungurwa kwesimba rakachengetwa kubva pachiropa chako nemisungo uye kunobatsira kugadzirwa kwemasero uye masero matsvuku eropa.
Zvakanakira Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
P5P uye Cardiovascular Risk
Zvinoenderana ne "Vitamin B6 Therapy: Musiki Anochinjika Mushonga," yakanyorwa naJohn Ellis, P5P inokwanisa kudzikisa mwero wemuviri wako wehomocysteine. Mumuviri wako, amino acid homocysteine ​​haiwanikwe kubva mukudya, asi kubva kune imwe amino acid inonzi "methionine." Homocysteine ​​inogona kuisa njodzi kuhutano hwemwoyo, uye P5P inogona kudzikisa mamethionine mumuviri wako, zvichikonzera kugadzirwa kwakaderera kwehomocysteine. Pamusoro pezvo, P5P inogona kubatsira kuchengetedza muviri wako kubva ku coronary moyo chirwere, hosha yeropa uye chirwere checerebral vascular.
P5P uye Kanzer
Zvinoenderana ne "Cecil Mushonga: Nyanzvi Ongorora," P5P kushomeka kunogona kubatsira kune pancreatic uye kenza yemukondombera. Muzviitiko zvakawanda, vakadzi vane gomarara remuromo wechibereko vanouya nekushomeka kwevhitamini B-6. Nezve kenza yepancreatic, ongororo yakaburitswa mu "Zvinyorwa zveNational Cancer Institute" yakagumisa kuti 26 muzana yekenza yepancreatic cancer yakaongororwa inogona kunge ichidzivirirwa neP5P yekuwedzera isati yawana gomarara repancreatic. Vatsvakurudzi havana kuburitsa dhata nyowani inosanganisira izvi zvakawanikwa.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Kushambadzira
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) kuongorora
Munhu wese anzwa nezve vitamini B6 uye vashomanana vangave vakakwanisa kukuudza kuti maBitamini emuB ane tsvakurudzo dzakawanda pamusoro pesimba uye nhere system. Vitamini B6 inokosha kune hupenyu pachahwo. Kuva nezvikamu zvakaderera zvemuviri uyu unogona kukonzera kukonzera kweganda, kuora mwoyo, dutu, musoro, uye zvimwe, zvinetso zvakakomba, zvakadai sekurwadziwa kwemwoyo uye kurohwa. Asi iwe unogona kushamisika kuziva kuti vitamini B6 ndeimwe yemhando dzakanakisisa dzemuviri dzakapoteredza kuti dzishandise marudzi ose ehutano hwepfungwa. Asi hazvisi nyore nguva dzose kuwana kubva pakudya. Waizviziva here kuti kubika, kuvhenekera, kunyorera, kuchengetedza kana kushandiswa kwezvokudya zvinogona kupedza zviratidzo zvavo zvevhitamini B6 nekuwanda kwe50%? Uye wakanga uchiziva here kuti vamwe vanhu havagoni kushandisa mamwe mavhithamini B6 zvinobudirira? Pane chimiro chakakosha, chinoshanda chevhitamin B6 iyo muviri wako unogona kushandisa nyore zvinonzi pyridoxal-5-phosphate, kana P5P kwenguva pfupi. Iyi fomu ine anoshamisa kuporesa zvinhu. Ndinowanzozvikurudzira kuvanhu vanotambura nemarwadzo emutsipa, kupisa tsoka (chirwere cheshuga neuropathy), carpal tunnel syndrome, PMS, uye edema (kuchengetwa kwemvura), pakati pemamwe mamiriro ezvinhu. Migumisiro yevanhu ava yakave yakakosha. Mune nyaya ino yeTerry Talks Nutrition, tichaongorora mamwe maitiro anogona kunobatsira zvikuru kubva kune fomu inoshanda - P5P - yevhitamini B6, pamwe chete nemugoverwa wemaminerari anogona kukukanganisa hutano hwako, uye kunyange kudzivirira mamwe mavhivhi!
Nzira yekutenga Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) kubva kuAASraw